Duqeyn ka dhacday Jubbada Dhexe & Dowladda oo faah faahisey - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Duqeyn ka dhacday Jubbada Dhexe & Dowladda oo faah faahisey
Dowladda Soomaaliya ayaa faah faahin ka bixisay Duqeyn dhinaca cirka ah oo Diyaaradaha Mareykanak oo kaashanaya Ciidanka Dowladda ay ka fuliyeen deegaanka Wadajir oo ku yaalla duleedka degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe.
War-Saxaafadeed kasoo baxay Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in duqeyntaas lagu diley Saddex Xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab,isla markaana wax khasaaro ah kasoo gaarin dad rayid ah.
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dawladda Mareykanka ayaa qaada taxadar dheeri ah oo ku aadan ka hortagga waxyeelada rayidka inta lagu gudajiro ladagaalanka kooxda argagaxisada ah iyada oo si buuxda loo baarayo eedaymaha lasoo wariyo. Tan ayaa waxay aad uga duwantahay weerarrada aan loo aabayeelin ee ay Al-shabaab ku qaadaan shacabka Soomaaliyeed.
Al-Shabaab waxaa weerareen degmada Qoryooley iyada oo aysan magaalada ku sugnayn Xoogga Dalka iyo AMISOM toona. Dadka reer Qoryooley ayaa iskaga caabbiyey qoryahooda caadiga ah, kuna qasbay Al-shabaab in ay dib-ugagurtaan aaggaa. Al-shabaab way sii wadaan weerarrooda ay ku qaadayaan shacabka aan waxba galabsan iyo dalalka deriska la ah Soomaaliya.
Hubinta hadda la sameeyey ayaa ah in cid shacab ah aysan wax ku noqon weerarkan.
Previous articleNin u xukunaa kiiskii Caaisho Ilyaas oo la siidaayey
Next articleDHAGEYSO:-Warka Subax ee Radio Risaala 20-02-2020